I ukupheka ezivamile ephelezelwa ukubukeka udoti ofuna kabusha, futhi kufanele kube imfucuza shredder, akunjalo kudala esikhundleni kudoti evamile. Ngosizo kule divayisi uzokwazi ukuba ugaye futhi ithunyelwa imfucumfucu amapayipi nge imfucumfucu yasendlini.
Le divayisi ngeke ukwazi ukubhekana nazo imifino, izithelo, amathambo amancane inkukhu, iphepha amathawula, ikhabe rinds, imbewu kanye nezinye izinto. Uma uthenga izinto ezinjalo, ezingeni kwenhlanzeko ekhishini sikhule nephunga uzonyamalala. Kulokhu, akukho ingozi odla amapayipi njengoba udoti kuyo ingumhlabathi ukuhlukanisa izinhlayiya kokuba Usayizi 3 kwangu ububanzi.
Shredder imfucuza kuyinto idivayisi kagesi noma mechanical, okuyinto efakwe ngaphansi echibini. Ukuze uhlele izinto zalo kuyodingeka cishe 40 cm yesikhala samahhala. Ikamelo ukudla udoti ngeke ziwohloka kakhulu isimo powdery. Nale umsebenzi uyozisingatha kudiski metal walubeka phansi ikhamera. It uzungeza ngesivinini 1450 linemibhikisho ngomzuzu futhi ngayinye ibutho centrifugal kuyosebenza odongeni ithangi imfucuza. Lesi sakamuva kuyinto Self-grater.
Ukusingathwa shredder has a egumbini lapho unikezwa Cams. Lapho ligijima izakhi idatha kugaywa kukadoti, okuyinto kuthiwa sicindezelwe ebondeni njengoba graters. Cams ukukhuthaza ukuguqulwa langcolile izingcezu ezincane. ukudla kusetshenzwe uthola kanye yokucindezela amanzi ngembobo abakhwabanisi ohlelweni amapayipi. Inzuzo eyengeziwe kokusebenzisa leli thuluzi ukhonza ukuthi powder etholakale ekudleni ahlanze ebusweni sangaphakathi ipayipi fat. imfucuza shredder eziyosebenza ngokushelela uma ngizwa ingcindezi amanzi kuyoba njalo futhi angabacwasi olunzulu.
Izibuyekezo mayelana imithetho ukusebenza idivayisi
Ngokusho abasebenzisi, ngoba ukusebeza kahle imishini ukugaya ukudla kumele ekuqaleni ukuvula abandayo umpompi. Khona-ke ungasebenzisa dispouzer, ngubani uqala ukusebenza emva ngokucindezela ikhi amandla. Ukusingathwa ethunyelwe abakhwabanisi, abasebenzisi zithi inqubo kuphelile ngemuva umsindo operation uzoyeka, ngalokho okuyokwenzeka ngemva kwemizuzu engu-2. Uma dispouzer zisuswe kusuka kokwenzayo kungacinywa ngamanzi abandayo isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu.
Izibuyekezo ze-chopper ukukhetha
Abathengi belulekwa ukuba dispouzera inketho ukunquma ungakanani umsebenzi okufanele enze. Kule umthamo kuzoncika ikusasa imishini, amakhono kanye netimphawu. Kubalulekile ukuba acabangele ukushuba umsindo, okuyinto lihlukile amadivaysi kagesi kanye lokukhanda. Uma ikhaya unezingane ezincane, kungcono ukhethe lokuqala. idivayisi kagesi Kumele uxhumeke esidayisa futhi ivuliwe Vuliwe. Shredding imfucuza kuleli cala ibangelwa ukugaya kubo ebodeni ekamelweni nofana ukuphula pistons yabo. Le nqubo aqede kudivayisi ahlabayo, yingakho ivikeleke kancane.
Lapho ekhetha imfucuza shredder, ungakhetha ezihlukahlukene mechanical, esebenzisa emsebenzini yayo ukudla ukugaya. Ukuhambisa izakhi ahlabayo ngenxa amanzi iconsi. Naphezu kweqiniso lokuthi lezi amadivaysi ayingozi ukufinyelela izindwani kuyoba esikhundleni nzima. Nokho, kungase kuphakame isimo lapho shredder imfucuza ukuwa Cutlery, deformable ngesikhatsi kokuhlinzwa. Kuyinto efiselekayo ukhetha dispouzer ezinjalo, okusikisela ukuthi kungenzeka ingasheshi esimweni salezi zimo.
Labo abathengi ngubani unquma ukuthenga shredder imfucuza ukudla kufanele baqaphele ukuthi izindleko mishini ingase ibe khona ehlukile. Inani kuncike amandla idivayisi iphinde ezisetshenziswa inqubo ukukhiqizwa. Kubalulekile ukuba banake futhi ukuthandwa sha. Ngokusho abasebenzisi, ukukhokhela amayunithi abanjalo bayakuba phakathi 200 kanye 600 zamaRandi. Kodwa uma uhlela ukuthatha ngosizo ochwepheshe inqubo yokufaka, izindleko zizoba $ 40 ngaphezulu.
Amalungu baphikisa ngokuthi ukudla udoti shredder kungaba umthombo izindleko ezengeziwe, ngoba amanzi ukusetshenziswa kuzokhulisa ukuba 3 amalitha ngosuku umuntu ngamunye. Lokhu kusebenza futhi ugesi izikweletu.
Izibuyekezo izici ukusebenza
Ukukhetha i dispouzer kagesi, ungakwazi bachithe yemifino noma izithelo peels, ikhabe rinds, ngisho amathambo amancane. Wetincenye teluhlaka kuthiwa sokuhlaziya, okuyizinto esiphikisayo imfucuza ngohlobo banana peels, onion izikhumba futhi sezikhwebu. Ngakho, ungeke ukwazi ukuthumela bedle ukudla udoti shredder nge isakhiwo fibrous. Ngokusho abasebenzisi, lokhu kungathikameza kabi ukusebenza kudivayisi.
Abathengi kaningi kufanele ilahlwe nati, amathambo, izithelo imigodi futhi kusele izingxenyana ezincane izitsha, khetha mechanical shredder imfucuza, okuyinto libuyekeza omuhle kakhulu. Kodwa ukusebenza imishini sibalekele ukuwela ukuminyana, intambo kanye imfucuza wezinto ezingaphili. Ukuze ekucubunguleni chopper mechanical asifanele, njengoba kalula kungalimala.
Amazwana mayelana grinder Ngo Sink Erator
Uma ungeke ukwazi ukunquma ukuthi iyiphi imodeli dispouzera ungakhetha, ungasinda sinake imfucuza shredder Ngo Sink Erator. Ukuze ukhokhele lizoba isamba eside, okulingana ruble 36.000. Nokho, idivayisi kuwufanele, njengoba sinezici oluvelele. Amalungu uqaphele indawo elula inkinobho isiqalo, okuyinto unomthwalo ekuqaleni komsebenzi.
Zonke imfucuza ngemizuzwana jikisa izinhlayiya emihle engasetshenziswa kalula wageza off ukugeleza kwamanzi zibe isimiso sokuthutha indle. Amandla chopper kuyinto 0.75 amahhashi. Idivayisi usebenza ethulile ngamaphesenti angu-60 ngaphambili zabo, okuyinto kakhulu efana abathengi. Ungakwazi ukubala on yokuthi idivayisi ngeke kakhulu, ngoba ngaphakathi ivikelwe. Abathengi ukugcizelela ukuthi idivayisi inhliziyo yesimanje uhlelo ezintathu-level ezenziwe ngensimbi engagqwali. Layisha imfucuza kungenziwa njalo nepepper futhi umthamo ekamelweni kuyinto 1.18 amalitha.
Lokhu imfucuza shredder, okuyinto intengo abanye abathengi kungase kubonakale okusezingeni eliphezulu, bathethelele ngentengo yaso ezinyangeni ezimbalwa, ngoba akudingeki ukhathazeke wokukhuculula imfucumfucu, ngezinye izikhathi eletha izimo ezithile ngesimo iphunga angaphandle. Phakathi kwezinye izinto, ukudla udoti kungadla eningi isikhala ikhishi elincane. Kubantu abadala lokhu kukhetha kungaba yisisombululo omuhle, ngoba abazange ngehlele ngokuvamile, ukuze abaphonse udoti. Izakhamuzi ephezulu liphumele izakhiwo nayo kaningi ukuthola amadivayisi ezinjalo.
Ebusweni centrifugal iphampa ngoba imithombo, ngoba imithombo, amanzi angcolile
"Altera Invest": ukubuyekezwa, ikheli kanye namanani
I-Polypropylene crane: incazelo, izinzuzo nokungalungi, ukufakwa
Lymph node: ukuvuvukala, izimbangela yayo kanye nokwelashwa
Kusukela okubonakala phambi zebhali? Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Buenoano Dzhudias: Black umfelokazi isigwebo
Ungenzi ngokwakho isithombe. Umyalo "Ungazenzeli ngokwakho isithombe"
Iresiphi yamaqanda agxiliwe: okulula futhi okuqala